My Account - rayhab ဖြစ်ပါသည်
username သို့မဟုတ် e-mail လိပ်စာ *
e-mail လိပ်စာ *
တစ်ဦးက password ကိုသင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, ဤ website ပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကထောကျပံ့ပေးသင့်အကောင့်နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ် privacy ကိုမူဝါဒက ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားပါကအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
AK ပါတီ၏ရွေးကောက်ပွဲ Ray အကောင့်ကျော်ပြေး, ဒါမှမဟုတ်အတိုက်အခံ? | ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ရွေးချယ်ရေး 20 / 05 / 2012 ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ရွေးချယ်ရေး: အ AK ပါတီနှင့် CHP ညီလာခံယနေ့ခေတ်အမှုကိုပြုလျက်ရှိသည်။ သူကပါတီနှစ်ခု၏အာဏာရကွန်ဂရက် izleyince နေဖြင့်အံ့အားသင့်ခံရဖို့မဟုတ်ဘဲအတိုက်အခံတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးဝေါဟာရများကိုအဘို့တန်ခိုး၌ဖြစ်ခြင်းကိုပိုမိုပြောင်းလဲနေသောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆိုပါ AK ပါတီ၏ညီလာခံ ... xnumx't အောက်တိုဘာလအအေးမဟာဗျူဟာအပေါ်ကျင်းပမည့်ဒေသခံတစ်ဦးရွေးကောက်ပွဲရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့စိတ်ကဒီအရှိန်အဟုန်ဖြစ်ပါတယ်နေသော်လည်း ... ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအလုပ်နွေရာသီခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းဗျူဟာကိုလည်းအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အထူးသဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏ပြီးစီးအတူတိုက်ဆိုင်။ ဒါဟာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှအသုံးဝင်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray ရာစုစိတ်ကူးယဉ်လိုင်းကိုအောက်တိုဘာလ xnumx't အတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်အဆိုပါ Kadikoy Kazlicesme Anatolia ကနေဥရောပဖို့ Bosphorus ie ...
ရထားလမ်းစနစ်များနည်းပညာသင်တန်းမှတ်စုများ: စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဝန်ထမ်းအကောင့် 14 / 07 / 2012 module ကုဒ်: 840UH0018 module အမည်: စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာအကောင့်ဖော်ပြချက်: ရထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့၏တွက်ချက်မှုအတွက်ဒီ module ကိုစွမ်းရည်နှင့်ရထားပစ္စည်းပုဂ္ဂိုလ်များတွက်ချက်မှု၏ဖန်ဆင်းထားသည်တစ်ဦးသင်ယူမှုသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Metro အတွက် MHP MAG အကောင့်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည် 24 / 01 / 2014 Metro အတွက် MHP MAG အကောင့်ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်: အမြေအောက်ရထား၏ပြင်းစွာတိုက်ရေပိုက်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်စေသောကြီးမားရေလွှမ်းမိုးအတွေ့အကြုံဥပဒေကြမ်းလျစ်လျူရှုမိုးသည်းထန်စွာကြီးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပါ။ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုပါတီ (MHP) တူရကီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Fatih Cetinkaya "ဟုအဆိုပါတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ပေါ့ဆမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဒေါ်လာသန်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်အများပြည်သူအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးခံခဲ့ရသည်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဘာသာရပ်ဥပဒေကော်မရှင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရေကြီးမှုအပေါ် MHP တူရကီပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု Cetinkaya အပေါ်အစီရင်ခံစာဖော်ပြပြည်နယ်ကိုသမ္မတက "ဝန်ကြီးချုပ်ယင်း 1 သန်း 207 တထောင် 500 ဒေါ်လာ 24 ကားတစ်စီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းကယ်နှုတ်တော်မူတစ်ခုချင်းစီကိုအဖြစ် ...
တူရကီ-Sivas9ဘီလီယံခန့်အကောင့် YHT အပေါ် '' ကိုမည်သို့အရာ 27 / 03 / 2018 တူရကီ-Sivas ခရီးစဉ်စီမံကိန်းအတွက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ၏သတ်မှတ်ထားသောနှစ်နာရီဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ယခင်နေ့ 'ရထားလမ်း-တင်သော "အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည်။ Cigdem Toker ရဲ့အရေးအသားသမ္မတနိုင်ငံ, အခမ်းအနား၏ဝိညာဉ်အတွက် Yozgat-Yerköy, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Yozgat ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ခ Bozdag, Sivaslıပညာရေးဝန်ကြီး Ismet Yilmaz အတွက်အခမ်းအနား၏ဓာတ်ပုံကိုသတင်း၌တည်သောလိုင်းပေါ်ဘူတာ၏တဦးတည်း, နီယွန်အရောင်တွေအရ ဒါဟာဆောက်လုပ်ရေးအဝတ်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီ-Kirikkale-Yozgat-Sivas လိုင်း 393 ကီလိုမီတာရှည်လျား။ BAŞKENTRAY 405 ကီလိုမီတာအပါအဝင် edilince ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ Herald အစ္စတန်ဘူလ် 5.5 နာရီသွားနိုင်နေချိန်တွင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးလီယို, စီမံကိန်း Sivas, Yozgat ၏ 4.5 ပြီးဆုံးသည်။ စီမံကိန်းများ၏9ဘီလီယံအထိစီးပွားရေးအရွယ်အစား ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Apaydin, Lock ကိုတွစ်တာအကောင့်ကိုရုပ်သိမ်း 14 / 12 / 2018 စက်လုပ်သမား39 လူတွေအများဆုံးဝေဖန်ရှုထောင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ 47 တစ်ခုမှာဒဏ်ရာရတဲ့ရထားမတော်တဆမှုပြီးနောက်သေဆုံးခဲ့သည်၏, မနေ့ကနံနက်တူရကီအတွေ့အကြုံ İsa Apaydın"S သောအများပြည်သူ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ခဲ့ဒါကြောင့်သော့ခတ်ခံရဖို့။ Apaydınမှ General Manager, high-speed ကိုမီးရထားမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်များသည်မှန်လျှင်, အဲဒါကိုသော့ခတ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှအသိပေးမရှိဘဲဤသတိထားဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Apaydin, ဝေဖန်လာမယ့်အပြီးယနေ့၏အဖြစ်အကောင့်ပေါ်ကသော့ခတ်ကိုဖယ်ရှား
AK ပါတီ၏ရွေးကောက်ပွဲ Ray အကောင့်ကျော်ပြေး, ဒါမှမဟုတ်အတိုက်အခံ? | ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ရွေးချယ်ရေး
Metro အတွက် MHP MAG အကောင့်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်
တူရကီ-Sivas9ဘီလီယံခန့်အကောင့် YHT အပေါ် '' ကိုမည်သို့အရာ
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Apaydin, Lock ကိုတွစ်တာအကောင့်ကိုရုပ်သိမ်း